တောမီး - ဝီကီပီးဒီးယား
တောမီးသည် ခြောက်သွေ့သော သစ်တောဒေသ သို့မဟုတ် ကျေးလက်ဒေသ တောပိုင်းတွင် လောင်ကျွမ်းသည့် မီးဖြစ်သည်။ အခြားမီးဘေးနှင့် ကွဲပြားချက်မှာ တောမီးသည် အတိုင်းအတာ ကြီးမားပြီး အနီးဝန်းကျင်သို့ အလျင်အမြန် ကူးစက်လောင်ကျွမ်းနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးတည်ရာအရပ်ကို ခန့်မှန်းရခက်သလို လမ်းများ၊ မြစ်ချောင်းများကို ခုန်ကျော်ကာ လောင်ကျွမ်းလေ့ရှိသည်။ တောမီး၏ ထူးခြားချက်ကို မီးလောင်ကျွမ်းရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ကူးစက်သည့် အရှိန်၊ မီးလောင်ကျွမ်းသည့် ဧရိယာအတွင်းရှိ မီးလောင်ကျွမ်းနိုင်သော အရာဝတ္ထုများ၊ မိုးလေဝသအခြေအနေ စသည့် အချက်များပေါ် မူတည်၍ သတ်မှတ်သည်။
တောမီး ဖြစ်ပွားသော စိုက်ခင်းများပေါ် မူတည်၍ တောမီးကို ရှပ်ပြေးမီး(brush fire)၊ ချုံပုတ်မီး(bush fire)၊ ကန္တရမီး (desert fire)၊ တောအုပ်မီး (forest fire)၊ မြက်ရိုင်းမီး (grass fire)၊ တောင်ကုန်းမီး (hill fire)၊ သစ်ဆွေးမီး (peat fire)၊ စိုက်ခင်းမီး (vegetation fire)နှင့် မြက်ခင်းပြင်မီး (veld fire)ဟူ၍ အမျိုးအစား ခွဲခြားနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ် သန်း ၄၂၀ မှ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပင်များ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အချိန်မှ စ၍ တောမီးဟူ၍ စတင် ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း ကျောက်ဖြစ် ရုပ်ကြွင်း မီးသင့်ကျောက်များက ညွှန်ပြနေသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိသမိုင်း တလျှောက်တွင် တောမီး ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည် ဇီဝစနစ်၏ သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့် တောကောင်များအပေါ် ကြီးမားသော ဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲမှု အကျိုး သက်ရောက်မည်ကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ကမ္ဘာကြီးသည် ကာဘွန်ကြွယ်ဝသော အပင်များ၊ ခြောက်သွေ့သော ဥတုများ၊ လေထဲရှိ အောက်ဆီဂျင်များနှင့် ကျယ်ပြန့်သော လျှပ်စီးများနှင့် မီးတောင် ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် နဂိုကတည်းကပင် လောင်ကျွမ်းလွယ်သော ဂြိုဟ်ကြီး တလုံး ဖြစ်နေသည်။
တောမီးများသည် သဘောသဘာဝကပင် လောင်ကျွမ်းပစ်သော ဂုဏ်သတ္တိ ရှိပြီး၊ လောင်ကျွမ်းနိုင်သော အရာဝတ္ထု ရှိပါက လောင်ကျွမ်းသည်။ တောမီးများသည် လူ့အသက်နှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများကို ဆုံးရှုံးစေနိုင်သော်လည်း၊ မီး‌တွင်း ပါဝင်သော သီးပင်စားပင်၊ သတ္တဝါနှင့် ဇီဝစနစ်အပေါ် ကောင်းကျိုးများစွာ ရှိသည်။ အပင်မျိုးစိတ် များစွာသည် မျိုးပွားရန်နှင့် ကြီးထွားရန်အတွက် မီး၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို မှီခိုနေရသည်။ သို့သော် တောမီး လောင်လေ့ မရှိသော နေရာတွင် လောင်ပါက ဇီဝ အကျိုးသက်ရောက်မှု မခံစားရချေ။ တောမီးသည် လောင်စာများ ရှိနေခြင်းနှင့် ရာသီဥတုကလည်း ကူပံ့ခြင်း ရှိလျှင် လောင်ကျွမ်းမှု ပိုမို ဆိုးရွားတတ်သည်။ 
တောမီးကို တားဆီးခြင်း၊ ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် နှိပ်ကွပ်ခြင်း နည်းဗျူဟာတို့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း ပြောင်းလဲလာသော်လည်း မဆုံးနိုင်သော ဇာတ်မျောကြီး ဖြစ်လျက် ရှိသည်။ တွေ့ရအများဆုံးနှင့် အကုန်အကျ အသက်သာဆုံး နည်းလမ်း တခုမှာ ထိန်းချုပ်၍ လောင်ကျွမ်းမှု (controlled burning) ဖြစ်ပြီး၊ တောမီး လောင်ကျွမ်းရမည့် အရာပမာဏ နည်းနည်းသာ ရရှိအောင် လျှော့ချပေးခြင်း၊ နည်းနည်းသာ လောင်ကျွမ်းခွင့် ပြုခြင်း ဖြစ်သည်။
↑ Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Third Edition. Cambridge University Press; 2008. ISBN 9780521858045. Archived 13 August 2009 at the Wayback Machine.
↑ National Interagency Fire Center. The Science of Wildland fire [archived5November 2008; cited 2008-11-21].
↑ BBC Earth - Forest fire videos - See how fire started on Earth။ 16 October 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Scott, Andrew C. (2006-07-18). "The diversification of Paleozoic fire systems and fluctuations in atmospheric oxygen concentration" (in en). Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (29): 10861–10865. doi:10.1073/pnas.0604090103. ISSN 0027-8424. PMID 16832054. PMC:1544139.
↑ ၆.၀ ၆.၁ Bowman, David M. J. S. (2009-04-24). "Fire in the Earth System" (in en). Science 324 (5926): 481–484. doi:10.1126/science.1163886. ISSN 0036-8075. PMID 19390038.
↑ ၇.၀ ၇.၁ Flannigan, M.D. (2005). "Forest Fires and Climate Change in the 21st century" (PDF). Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 11 (4): 847–859. doi:10.1007/s11027-005-9020-7. Retrieved on 26 June 2009. Archived 26 February 2009 at the Wayback Machine.
↑ The Ecological Importance of Mixed-Severity Fires - ScienceDirect။
↑ Hutto, Richard L. (2008-12-01). "The Ecological Importance of Severe Wildfires: Some Like It Hot" (in en). Ecological Applications 18 (8): 1827–1834. doi:10.1890/08-0895.1. ISSN 1939-5582.
↑ Stephen J. Pyne။ How Plants Use Fire (And Are Used By It)။ NOVA online။ 30 June 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ National Wildfire Coordinating Group Fireline Handbook, Appendix B: Fire Behavior (PDF)။ National Wildfire Coordinating Group (April 2006)။ 11 December 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ International Experts Study Ways to Fight Wildfires။ Voice of America (VOA) News (24 June 2009)။7January 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9July 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောမီး&oldid=727885" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။